Author Topic: ဟာသဥာဏ်စမ်း အမေး/အဖြေ (Read 165748 times)
« Reply #170 on: June 09, 2011, 04:25:22 PM »
၁။ ၂ ခု (၃)
၂။ ၁ နှင့်ညီတယ် (၃)
1/3 + 2/3 = 1, right?
0.33333... + 0.66666... = 1
Or, simplified: 0.99999... = 1
၃။ 64 (၂)
၁၃ ကောင် မြောက် ကနေ ၄၈ ကောင်မြောက် အထိက ၃၆ ကောင်ရပါတယ်။
၃၆ ကောင်က ဥကြင်းမှာဝတ်ရင် ၆၄ ကောင်က မ၀တ်ပါ။
၄။ ၃၆၅ ၁/၄ ထက် နည်းပါတယ် (၁)
ကမ္ဘာ ဟာနေ ကို တစ်ပတ်ပတ်မိရန် ၃၆၅.၂၄၂၂ ရက် အချိန်ယူရပါတယ်
၅။ ၂၄ နာရီထက်နည်းပါတယ် (၁)
A year equals 365.2422 days. If the earth wouldn't move around the sun, then the earth would make 365.2422 turns round her axis in one year. But because the earth also makes exactly one orbit around the sun in that year, the earth makes 365.2422 + 1 = 366.2422 turns round her axis in one year. One turn therefore takes
365.2422 × 24 hours / 366.2422 = 23 hours, 56 minutes and4seconds
၆။ Less than once in every four years (၃)
In our western calendar every year of which the number is divisible by4isaleap year, except century years not divisible by 400. For example, the years 1700, 1800 and 1900 were no leap years, but the year 2000 will be. Therefore not every fourth year isaleap year.
၇။ Gregorian calendar
In 45 B.C. Julius Caesar replaced the Roman calendar by the Julian calendar. In 1582 A.D. pope Gregory XIII replaced the Julian calendar by the Gregorian calendar, by improving the leap year rule. This Gregorian calendar is the calendar we still use today. The International calendar is one of the many proposals that have been done for the 'improvement' of the Gregorian calendar.
၈။ The summer on the northern hemisphere is longer than the summer on the southern hemisphere
The summer on the northern hemisphere, which lasts from the summer solstice (21 June) until the autumnal equinox (23 September), has an approximate length of 93.6 days. The winter on the northern hemisphere (and so the summer on the southern hemisphere), which lasts from the winter solstice (21 December) until the vernal equinox (21 March), has an approximate length of 89.0 days.
၉။ N has as many numbers as Z
Two sets A and B have the same number of elements if and only if there existsaso-called bijective functionffrom A to B.
Define the bijective function f: N -> Z as follows:
f(n) = -½n for n even
= ½(n + 1) for n odd
So for example, f(0) = 0, f(1) = 1, f(2) = -1, f(3) = 2, f(4) = -2, f(5) =3etcetera.fisabijective function from N to Z, and therefore N and Z have the same number of elements.
Approximately 250 babies are born every minute worldwide (1996 estimate).
၁၁။ ၂ ခုပဲ ကျွန်တော်မှန်တာပါ ကျန်တာက google တာ
« Reply #171 on: June 09, 2011, 04:49:27 PM »
Quote from: thargyi12 on May 26, 2011, 01:41:10 PM
မေး ရ အုံး မယ်
(1) ကန်ထဲမှာရေ၊ ရေထဲမှာမြွေ၊ မြွေခေါင်းမှာရွှေ။.............?
(2) နွားမတစ်ရာ ရေဆင်းလာ၊ ခြေရာလည်းပျောက် ရေလည်းနောက်။................?
(3) ဆုပ်လျှင် စူး၊ နမ်းလျှင် မူး၊ စားလျှင် ရူး။.............?
(4) သူ့အပင်က တစ်ရုံကြီး၊ သူ့အသီးက တစ်လုံးတည်း။.................?
(5) ငါ့နွားနက်နက် ချုံပေါ်တက်၊ ချက်ချက်သံမျှ မကြားရ။...................?
(6) အပင် နွဲ့နှောင်း၊ အသီးဖောင်းဖောင် မစားကောင်း။....................?
(၃) ပဒိုင်းပင်၊ ပဒိုင်းပွင့်၊ ပဒိုင်းသီး
(၅) သန်းနှင့် ဆံပင်
(၆) ဆံပင်နှင့် သန်းဥ
« Reply #172 on: June 09, 2011, 04:56:20 PM »
Quote from: thargyi12 on May 26, 2011, 01:27:11 PM
ရေမရှိ မြစ် လယ် ကောင်
ထင်းမရှိ တောင်သုံး တောင်
အနိစ္စတော၊ ဒုက္ခတော၊ အနတ္တတော။
« Reply #173 on: June 10, 2011, 01:40:56 PM »
thz4ur answer ko jackass
so no 11 ans4u is u right3marks bro
anyway thz4ur interest dude
« Reply #174 on: June 10, 2011, 01:47:10 PM »
wow bro sysattux damn u really good
all ans is correct the ans is
so i think no need to ans no 11 u r full marks ......... congratulation bro u r so good
« Reply #175 on: June 10, 2011, 01:57:18 PM »
kyaw thu question is nobody ans i think ppl not interest so i ans4all ppl
၄။ ရဲ့ အဖြေ ကောင်းချစ်တဲ့ မမ
နံပါတ်6ရဲ့ အဖြေက.. ထွန်းထွန်းနှိင် ဇာတ်ပို့ ဆု ရသွားတာ .. ချစ်မီးလျှံထဲက မေချိုပါ။
၈။ သူငယ်ချင်းလို့ ဆက်၍ခေါ်မည်ခိုင်
၉ ။ ဗေဒါလမ်း ။ မို.မို.မြင့်အောင် ဇော်ဦး ၊ ချစ်ချစ်ဇော် လွှမ်းမိုး
ok every hveanice day .........
« Reply #176 on: June 10, 2011, 02:07:54 PM »
၂ ။ စန္ဒာ
၃။ ညွန့်ဝင်း +၀ါဝါ၀င်းရွှေ
၅။ ကိုလူချောတို့လာချေပြီ
၇ ။ ၀င်းမင်းသန်း
9 ရဲ့ အဖြေက ဂျပန်
« Reply #177 on: June 10, 2011, 02:14:05 PM »
« Reply #178 on: June 13, 2011, 10:20:47 AM »
(၁) မြစ်အဖေကြီးနဲ့မြစ်အမေကြီးက မွေးတဲ့မြို့
(၅)ဒီနေ့ည ငါစောင့်ရတဲ့အလှည့်မဟုတ်ဘူး ဆိုတဲ့မြို့
(၁၆) ရုံးသွားကျောင်းသွားသတိထား ဒါတွေယူကွယ့်မမေ့နဲ့တဲ့... အဲ့ဒီမြို့ (၁၇)အဲ့ဒီမြို့ရွာလိုက်တာမှသဲကြီးမဲကြီးပဲတဲ့
(၃၆).ဂျော်ကီတွေကြိုက်တဲ့မြို့ . . . ဒါမျိုးတွေကျ ကိုယ်ကလဲကိုယ်ကြိုက်တာဖွက်တာ ဖြေတဲ့လူကလဲကိုယ်ထင်တာပြောနိုင်တာဘဲ ဖြေပေးကြည့်ကြပါ
« Reply #179 on: June 14, 2011, 08:22:12 AM »
(၃၆).ဂျော်ကီတွေကြိုက်တဲ့မြို့ . . .
« Last Edit: June 14, 2011, 08:24:14 AM by totegyi »